Osaka City University - Fianarana in Japana. mpianatra iraisam-pirenena
fanafohezan-teny : Ray
Créé : 1880
Aza adino ny iaraho midinika ny Osaka City University
Misoratra anarana ao amin'ny Osaka City University
Osaka City University nankalaza ny tsingerin-taona 135th in 2015. Izany izao ny lehibe indrindra any Japana oniversite-bahoaka, amin'ny 8 -misaina sy ny 10 nahazo diplaoma sekoly, fanatitra licence, tompony sy ny doctorat ao amin'ny taranja isan-karazany ny fitsipika. Tamin'ny fotoana ny fametrahana, ny ben'ny tanànan'i Osaka, Hajime Seki, nanome antsika ny iraka manokana: "Ny anjerimanontolo vaovao dia tsy tokony ho fanahafana an'i-pirenena anjerimanontolo; dia tokony hanompo ny zavatra ilain'ny olom-pirenena; fitondran-tena tany am-boalohany fikarohana momba ny kolontsaina, Toe-karena, sy fiaraha-monina ao an-tanànan'i Osaka sy mampita ny vokatra tamin'ny olona tao an-tanàna. "Ny fahitana dia mbola foana ho fanomezam-boninahitra avy amintsika mandraka androany.
Ny olana atrehin'ny Osaka dia mitovy olana atrehin'ny tanàna manerana izao tontolo izao. Eto amin'ny OCU, dia hanana ny fahafahana mba hahazoana ny fianarana ary hanatanteraka fikarohana izay fanamby anao mba hahita vahaolana ho an'ny zava-manahirana toy ny fiovaovan'ny toetr'andro, famatsiana angovo madio, an-drenivohitra ny fahasalamana, ary ny loza araka ny natiora, olana izay ihany no ho voavaha amin'ny alalan'ny natambatra manerantany sy ny fomba fijery eo an-toerana.
Io sekoly efa namoaka maha Nobel roa laureates, Mpampianatra efa misotro ronono Yoichiro Nambu in Fizika sy ny Profesora Shinya Yamanaka in Fitsaboana. Ao amin'io fanahy ary marisika, OCU mikendry ny hikarakara ny olona izay afaka mandray ny andraikitra ho mpitarika eo amin'ny fiaraha-monina, fitondran-tena liberaly sy ny tany am-boalohany fikarohana amin'ny ambaratonga iraisam-pirenena sy ho tonga ny avonavon 'ny tanàna.
OCU manome anao ny hafa sy ny rivo-piainana ara-tsaina liberaly izay ianao dia ho afaka miresaka malalaka sy hampivelatra ny hevitrao, raha mampiasa tsara interdisciplinary fianarana sy ny fikarohana sy ny matanjaka fotodrafitrasa an-toerana sy iraisam-pirenena tambajotra akademika. Manasa anareo rehetra ho tonga sy hiaraka aminay famahana ny olana ny ankehitriny sy ny ho avy.
Filohan'ny Osaka City University
Mba hahatratra ny rehetra izao asa fitoriana ny university- ny hanampy amin'ny talenta ny ambony sy ny fikarohana ny fahamarinana.
Mba ho oniversite fa ny olom-pirenena ho afaka mirehareha matetika,
Mba mihevitra ny tanàna ho toy ny lohahevitra ho an'ny fandalinana sy hahita vahaolana manan-tsaina noho ny olana manokana.
Hanome indray ny vokatry ny fampianarana sy ny fikarohana asa tany an-tanàna sy ny olom-pirenena, ary handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina na eo an-toerana sy ny fiaraha-monina iraisam-pirenena.
Mba ho oniversite izay manakaiky ny citizens-
Mba hitondra ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina ao an-tanànan'i Osaka, toy ny an-drenivohitra-monina oniversite.
Mba hampandrosoana ny liberaly sy ny famoronana ny fanabeazana sy ny fikarohana, ary ambony fitsipika ara-pahasalamana.
Mba hanatsarana ny asa isan-karazany tao an-tanàna toy ny kolontsaina, Toe-karena, orinasa, sy ny fitsaboana, miaraka amin'ny olom-pirenena, ary miezaka ny hahatakatra ny toe-javatra ny tena harena.
Faculty ny Business
Faculty boky aman-gazety sy ny Human Siansa
Nahazo diplaoma Sekoly boky aman-gazety sy ny Human Siansa
Nahazo diplaoma School ny Nursing
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Fiainana Human Science
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Creative Tanàna
Osaka City University (Ray) dia ahitana ny valo-misaina sy ny folo nahazo diplaoma sekoly. OCU miresaka ny fiandohan'ny amin'ny 1880 nanorenana Osaka Commercial Training Institute, ny foibe ara-barotra sy ny orinasa ny fianarana any Osaka. The Institute no anarana araka izay mivelatra sy nitombo, lasa Osaka City Commercial Sekoly (1889), Osaka City Commercial College (1901), Osaka University of Commerce (1928), ary farany Osaka City University in 1949. Tamin'ny Aprily 2006, Osaka City University dia reconstituted ho toy ny orinasa oniversite-panjakana.
OCU ho amin'ny fametrahana voalohany Japana monisipaly oniversite, Dr. Hajime Seki, ben'ny tanànan'i Osaka, hanangona olona miavaka fahitana. Ny vaovao anjerimanontolo tsy tokony ho fanahafana an'i anjerimanontolo-pirenena; dia tokony hanompo ny zavatra ilain'ny olom-pirenena; tany am-boalohany dia tokony hitarika fikarohana momba ny kolontsaina, Toe-karena, sy ny fiaraha-monina ao an-tanànan'i Osaka sy mampita ny vokatra tamin'ny olona tao an-tanàna. Nandritra ny 70 taona tantara, Osaka City University dia tamim-pahatokiana mankatò ny nanorenana izao fahitana, fanaovana an-drenivohitra olana iray amin'ireo foibe olana.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Osaka City University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Osaka City University ao amin'ny Map
Photos: Osaka City University ofisialy Facebook
Osaka City University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Osaka City University.